Waa maxay Cunuggu Waa Eeyga My? Sida loo Garto Nooc kasta oo Ey ah - Featured
Waa maxay Cunuggu Waa Eeyga My? Sida loo Garto Nooc kasta oo Ey ah
Nasiib baad ku filan tahay in indhahaas bunni ee qurxoon kugu doortay guriga eyga . Waxaad buuxineysaa waraaqaha oo aad gurigeeda geynaysaa. Foomamkeeda ayaa sheegaya inay tahay nooc isku dhafan; laakiin waxaad isweydiinaysaa maxay ahaayeen waalidkeed waalidkeed?
Maqaalkan waxaan ku soo ururinay talooyin sare oo kaa caawinaya inaad ogaato waxa eygaagu yahay iyo inuu ku siiyo xirfado lagu aqoonsado eeyaha badankood ee wadada ku socda.
In kasta oo aad u baahan tahay baaritaanka dhabta ah ee DNA-da si sax ah loogu aqoonsado hidaha iyo eygaaga, talooyinkan wax ku oolka ah ayaa kaa caawin doona inaad ku aqoonsato eeyaha badankood aragga.
Sidee loo sheegaa waxa eygu yahay
Muuqaalka Eyga - Madaxyada
Muuqaalka Eyga - Dhegaha
Muuqaalka Eyga - Coat
Muuqaalka Eyga - Midab
Muuqaalka Eyga - Dabada
Muuqaalka Eyga - Soo Koobid
Tijaabi Xirfadahaaga - Noocyadu waa Eygayga eyga
Tijaabinta DNA si loo Aqoonsado Taranka
Waxaa jiray boqolaal nooc oo eeyo ah ka hor intaanan ku darin tirada sii kordheysa ee noocyada naqshadeeye ee liiskaas.
Illaa aad si joogto ah ula shaqeysid eeyaha, way adkaan kartaa in si sax ah loo ogaado nooca taranka ee indhaha kugu haya. Nasiib wanaag, markaan si dhow u fiirino waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo siiya:
Eeygu wuxuu leeyahay saddex nooc oo noocyada madaxa ah: Dolicocephalic (midig), Brachycephalic (bidix hoose), iyo Mesocephalic (bidix kore)
Eyga madaxiisu waa tilmaan waxtar leh sida ay jiraan saddex nooc oo noocyada dhakada ah ee waaweyn :
Dolicocephalic - Kuwani waa san dheer, ama dhasho madax dheer sida Afghan Hound ama Collie.
Brachycephalic - Noocyada Brachy waa kuwa fidsan ee wajiga leh, noocyada gaaban ee muxuubsan sida Shih Tzu, Pug, Boxer ama French Bulldog.
Mesocephalic - Kuwani waa raggaas meel dhexe ku yaal sida labrador retriever, the German Shepherd ama Dalmatian.
Dhegaha saxda ah (dhexda), dhagaha jilicsan (bidix) iyo dhegaha dhaadheer (midig)
Inta aan weli fiirineyno madaxooda, wax badan ayaan ka sheegi karnaa dhegahooda. Eyda qaarkood waxay leeyihiin dhago kacsan oo dhibic leh sida West-Highland White Terrier ama German Shepherd.
Qaar kale waxay leeyihiin dhago jilicsan sida Bahalka oo kale ama Dachshund. Hilibleyda urta waxay u muuqdaan kuwo dhego dhaadheer leh maadaama ay ka caawinayaan dabinnada urta ay raacayaan.
Shaqeynta, noocyada difaaca waxay u muuqdaan inay leeyihiin dhago kacsan maadaama ay ka dhigeyso mid nabdoon (waxay maqli doonaan hanjabaado goor hore). Dabaasha taariikheed waxay lahaan lahaayeen dhago daadsan si looga hortago in biyo ay galaan dhagahooda.
Marka xigta waxaan eegi karnaa jaakadooda. Noocyada shaqeynaya, ee ka bixi lahaa canaasiirta waxay u muuqdaan inay leeyihiin jaakad laba jibbaaran. Koodhka hoose ee hoose ayaa kulayl ka dhigaya oo timaha ilaalada qalafsan ayaa ka ilaalin doona roobka iyo / ama barafka.
Noocyo laba jibbaaran oo dahaaran ayaa waxaa ka mid ah Shepherd Jarmal, Alaskan Malamute iyo Labrador. Noocyada Terrier-ka waxay leeyihiin jaakad qoyan.
Jaakad ka samaysan dharka dhalaalaya ayaa ka kooban jaakad qaro weyn oo diiran si ay u kululaato iyo jubbad dusha ka kacsan oo wasakhda iyo biyaha ku xira; iyaga oo nadiif ah.
Koodhka gogosha leh waxay ka dhigtay kuwo aad u firfircoon oo maadaama ay tahay lakab keliya, kuma cuslayn markay dabbaalanayaan. Koodhadh siman oo laga helay cawl ama qulqulka ayaa gacan ka gaystay xawaarahooda iyo sahlanaanta socodka hawada.
Midabku waa cunsurka ugu adag in la isticmaalo marka la aqoonsanayo eyga.
Waxaan sidoo kale wax badan ka sheegi karnaa eeyga midabkooda. Waxaad ka heli kartaa eeyo midab leh ama midab leh sida 'Cocker Spaniel'. Waxaa laga yaabaa inay u muuqdaan sida Dalmatian. Noocyada qaarkood waa kuwo isku duuban ama la jeexjeexay.
Hidda-wadaha Merle waxay keentaa xoqid ama xoqitaan midab leh waxaadna heli kartaa midabbada indhaha ee indhaha ama midabka maqaarka ee kala duwan. Dappling waa mid la mid ah, laakiin waxaad inta badan ka heli doontaa Dachschund goglan.
Fiiri dabadooda, ma toosan tahay, gaaban tahay, qalloocan tahay, xitaa dabada ma leeyihiin? Ugaadhsadayaasha shaqeeya ayaa badiyaa dabada u xirtaa si looga hortago dhaawac sida terriers ama spaniels.
Ma aha oo kaliya muuqaalkooda iyaga ayaa siin doona, laakiin sidoo kale dhaqankooda ayaa bixin doona.
Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad tilmaamto astaamaha si gaar ah, waxaa laga yaabaa inaad fikrad ka haysato inay ka tirsan yihiin nooc eey gaar ah:
Eeyaha cayaaraha waa kuwo firfircoon oo feejigan; Kuwaas waxaa ka mid ah Labradors , Isbaanishka iyo Soo Celiyayaasha.
Hounds waxaa ka buuxa adkeysi; kuwan waxaa ka mid ah Beagle, Basenji iyo Coonhound.
Noocyada caruusadaha lagu ciyaaro ayaa yar cabir ahaan laakiin shakhsiyan ku weyn. Waxaa ka mid ah Affenpinscher, Havanese iyo Maltese.
Noocyadaas 'Herding' waa kuwo caqli badan lana tababaran karo laakiin waxay yeelan karaan u janjeerida inay daaqaan carruurta yaryar! Kuwaas waxaa ka mid ah Belgian Malinois, Border Collie iyo Pembroke Welsh Corgi.
Halkan, waxaad ogaan kartaa dhagaha isla markiiba. Dhagaha waaweyn soo jeedi inay jirto Chihuahua halkan ku yaal meel. Fiiri jaakadda. Waa wiry. Si fudud ayaa loo rumaysan karaa inay jiraan waxyaabo kale oo halkan ku jira.
Midabaynta halkan waxay soo jeedin kartaa noocyo fara badan; madow iyo caddaan waa caadi. Koodhka la jarjaray wuxuu soo jeedinayaa is qurxin joogto ah. Sidoo kale waa jaakad keliya oo lakab ah. Xuubka dhaadheer wuxuu soo jeedin karaa asal Terrier. Tani ma noqon kartaa a Jack Russell Terrier lagu tallaalay Poodle?
Jaakada ballaaran ee curly waxay soo jeedinaysaa poodle isla markiiba! Laakiin fiiri sida uu u taagan yahay. Sidoo kale, fiiri jaakadda midabada kala duwan leh ee lugaha. Tani ma noqon kartaa Terling-ka Bedlington ee Poodle lagu tallaabay?
Midabaynta iyo maaskaro wajiga ayaa ku qaylinaya Belgian Malinois laakiin dhagahaasi waxay leeyihiin muuqaal aad ugu eg Terter Terrier?
Dhererka jaakadda iyo mowqifka halkan ka taagan ayaa soo jeedinaya Collie? Laakiin midabaynta madow iyo tan ayaa soo jeedinaya Shepherd Jarmal ? Ma noqon kartaa iskutallaabta loo yaqaan 'Collie cross GSD'?
Midabkiisu wuxuu soo jeedinayaa Feeryahan? Laakiin fiiri cabirka cagahaas? Waxay u egyihiin baangado waaweyn oo Daan ah.
Waxaan kaliya tixgelin karnaa sida eeyadaani u egyihiin, iyo sida dhaqankoodu ugu egyahay noocyada qaarkood. Sida kaliya ee lagu ogaan karo nooca eyga aad leedahay waa inaad fuliyaan baaritaanka DNA eeyga . DNA waa maxaa sameeya xeerka hidda-wadaha wax kasta oo nool. Qof kasta oo bani'aadam ah ama xayawaan ah wuxuu leeyahay lambar gebi ahaanba u gaar ah.
Baadhitaannada Eyga DNA-da badankood waxay ka kooban yihiin in dhabanka lagaaga qaado qashinkaaga oo loo diro falanqeyn. Imtixaanada guud ahaan waxay ku kacaan $ 60 doolar ama ka badan waxaana lagu sameyn karaa gurigaaga raaxadiisa.
Waxaa jira shirkado kala duwan oo bixiya baaritaanka Dog DNA, guud ahaan hadba inta qaaliga ah ee baaritaanka, eey eyda badan ee shirkaddu ku leedahay keydkooda. Sida dhammaan nidaamyada keydka macluumaadka, saxsanaanta ayaa hagaagi doonta maaddaama shirkaduhu ururiyaan xog dheeri ah. Waxay yeelan doonaan fiilooyin dheeri ah oo DNA ah si ay isu barbar dhigaan shaybaarka.
Markaad amarto xirmada muunadaada DNA, waxaad suuf ka qaadan doontaa gudaha dhabanka saxaaradaada. Waad soo celin doontaa shaybaarka, sida ku xusan tilmaamaha ku qoran xirmada gudaheeda iyo 2-4 toddobaad gudahood waxaad heli doontaa natiijooyinkaaga. Tijaabadu waxay cadeyn doontaa, halka ay suurtagal tahay intee in le'eg oo gaar ah oo nadiif ah ayaa ku jirta eeygaaga.
In kasta oo aysan jirin lambarro adag oo sheegaya sida saxda ah ee baaritaanka DNA ee eygu, haddana waxaa jira walaac ah in haddii xog-ururin kaliya aysan ka jirin kaydka xogta meesha tijaabada lagu baarayo, markaa macluumaadka kaliya ma soo muuqan doono. Marka la soo koobo, haddii eeygaagu leeyahay nooc naadir ah oo iyaga ka mid ah; dhif iyo naadir ah oo aan ku jirin xogta, waligaa ma ogaan doontid.
In kasta oo ay fududahay in la arko eey saafi ah, way ka sii adkaan kartaa haddii aan isku dayeyno inaanu ogaano isku-darka isku-xirkeenna.
Adigoo fiirinaya muuqaalkooda, qaabkooda madaxa iyo cabirkooda, dhagahooda, nooca jaakadooda iyo qaabkooda waxaa suuragal ah in lagu aqoonsado noocyada taranka.
Taas kaliya maahan, waxay u dhaqmi karaan si la mid ah noocyada qaarkood; U qodida sida feeryahan tusaale ahaan.
Sida kaliya ee lagu ogaan karo nooca eyga aad haysato waa inaad sameysid baaritaanka DNA; taasi waa haddii noocooda lagu daro diiwaanka dabcan.
Laakiin, ma hubno haddii qayb ka mid ah madadaalo ay la yaaban tahay oo ay tilmaamayso astaamaha iyo nuances qaarkood?
Noo soo sheeg sidaad ugu soo gudubtay imtixaankeena iyo haddii aad aragto astaamo gebi ahaanba ka duwan.
Black Pomeranian: Tilmaam dhammaystiran oo loogu talagalay Jet Black Pom
maxaa sababa in eey gaagto
Immisa goror ayaa eey leeyihiin
Eeyadu ma cuni karaan cananaaska cusub
waa maxay midabada pomeranians soo galaan
poodle lagu qasay shih tzu